हात सर्पले लगेपनि,परिश्रम रोकिएको छैन,लक्ष्मी थापाको प्रेरणादायी कथा !(भिडियो) – Arthatantra.com
“बाउले छोरी दिएँ भन्थे नम्बरमा
नाम्लो डोरी टुटेन कम्मरमा ”
रबिना पौडेल, धादिङ (स्थलगत रिपोर्टिङ)। गाउँघरमा दिदीबहिनीहरुले घाँस दाउरा गर्ने बेलामा गाउँने झ्याउरे भाका यस्तै यस्तै हुन्छन् । तर यो भाका भन्दा अलि फरक छ प्रसंग !
सबै भन्दा पहिला हेर्नुस यो तस्वीर
यो तस्वीर हेर्नुभएपछि तपाई आफै अनुमान गर्नुहोस् । कतै यी तस्विरलाई हेरिरहँदा तपाईको आङ्नै सिरिङ्ग त भएको छैन ?
उत्तरी धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालीका मुलपानीकी लक्ष्मी थापा क्षेत्रीको तस्विर हो यो । उनको दाइने हात काटिएको छ । अरुको स्याहार र हेरचाह पाउनु पर्ने उनी आफैँले घाँस दाउरा र मेलापात गरेर परिवार धानेर बसेकी छिन् । उमेरले ३० वर्षकी लक्ष्मी थापा पाखुरामा डोरीले हँसीया बाधेर घाँस काट्छिन् र कोदो टिप्छिन् । यस सम्बन्धमा हामीले विभिन्न समयमा लक्ष्मी थापाको भिडियो लिएका छौं । हेर्नुस् भिडियो ।
एक हातले मात्र सहजै कार्य गर्न सक्ने भएपनि उनी भाँडामाझ्ने, कपडा धुने, नाङ्ग्लो निफन्ने आदी कामहरु आफैं गर्छिन् ।
लक्ष्मी थापाले चामल निफन्दै गर्दाको दृष्य
उनी आफ्नो कामका लागि अरुको आशा गरेर बस्दिनन् । बरु अरुले भन्दा पनि छिटो काम गर्छिन् । शील स्वभावकी लक्ष्मीको स्वभाव देख्ने सबै मानिसहरु आश्चयमा पर्दछन् ।
उनी भन्छिन् :“ सुरुमा काम गर्न निकै अप्ठ्यारो हुने गरेको थियो । अहिले भने बानी परेको छ । धेरै काम गर्यो भने हात दुख्छ, आफुले सकेको जति त गर्नेै पर्यो नी !”
कसरी लक्ष्मीको हात चुडियो त ?
लक्ष्मी ८ वर्षको हँुदा मकै पिस्न घट्टमा गएकी थिइन् । उनलाई बाटोमा सर्पले टोकेछ । त्यहि कारण बाल्यकालमा नै दाहिने हात काट्नु पर्यो । उनको दुखको घडी त्यहाँ बाट सुरु भयो ।
उनी भन्छिन् “मलाई अरुसँगै खेल्न, काम गर्न मन लाग्थ्यो तर म सक्दिन थिएँ । तैपनि कोसिस गर्न छोडिन । १२ वर्ष हँुदा देखि आमालाई घरधन्दा सघाउन थालेँ । आफ्नै ढङ्ले काम गरे र आज सबै काम गर्न सक्ने भएकी छु ।”
सिन्धुपाल्चोककी चेली लक्ष्मीले २४ वर्षको उमेरमा त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालीका मुलपानीका यमबहादुर थापा सँग प्रेम विवाह गरिन् । सवारीका सहचालक यम बहादुरसँग मेलम्चीमा भेटघाट भएपछि उनीहरुको मन मिलेर विवाहबन्धनमा बाँधिएको लक्ष्मी बताउँछिन् ।
लक्ष्मी र यम बहादुर विगत १ वर्ष देखि छुट्टिएर बसेका छन् । लक्ष्मीसँगै संगै जीउने संगै मर्ने कसम खाएका यम बहादुर भन्छन्, “आर्थिक अबस्था नाजुक भए पनि श्रीमतिको साथ पाएकोले घर चलाउन ज्यादै सजिलो छ । म धेरै खुसी छु ।”
आखिर कोसिस गर्ने हो भने संसारमा के कुरा असम्भव रहेछ र ? लक्ष्मी थापाले त आफ्नो जीवनसँग हरेस खाएकी छैनन् भने हामीले आफ्नो दुःख गरेर मेहनत गरेर आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्न के गाह्रो छ र ? लक्ष्मीबाट सबैले प्रेरणा लिनु पर्दछ ।
प्रकाशित मितिः२०७४ भदौ ३ गते
६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ आयोजना अब अगाडि बढ्ने ! काठमाडौ। महाभूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ जलविद्युत् आयोजनाको […]
इन्स्योरेन्सले दिने भो २५ प्रतिशत बोनस, सेयर मूल्य प्रति कित्ता करिब ४ हजार काठमाण्डौं । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपालले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तमा गत […]
अब अर्काको एसएमएस्,टेलिफोन कल डिटेल हेर्न नपाइने,सर्वोच्चले दिनुपर्छ आदेश ! काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले अपराध अनुसन्धानका नाममा व्यक्तिको टेलिफोन कल डिटेल हेर्ने […]
बेलायती राजकुमार एक दिन अगावै नेपाल आउँदै, के के गर्नेछन् उनले ? काठमाण्डौं । बेलायतकी महारानीका तर्फबाट पहिलोपटक नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्न लागेका […]
हाइड्रोको आइपिओ किन्नुहोस्, हप्तादिनमै जारी गर्दैछ ३० लाख कित्ता ! काठमाण्डौं । अरुण कावेली पावर लिमिटेडले ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता सेयर […]